Telefoonada ugu fiican ee Android: tijaabooyinka, bilaabista, xanta ... | Androidsis (Bogga 20)
Huawei Nova 3i wuxuu ka soo muuqanayaa Aliexpress ka hor waqtiga
Huawei Nova 3i ayaa gabi ahaanba ka dusay Aliexpress. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee dhexdhexaadka ah shirkadda Shiinaha.
Sawirada ugu horreeya ee Galaxy Note 9 waa la sifeeyey
Waxaa jira wakhti yar oo kayar oo loogu talagalay Galaxy Note 9 si uu u arko nalka si rasmi ah ugu dambayntiina waan xaqiijin karnaa iyo / ama diidi karnaa dhammaan wararka xanta ah ee aan hayno Marka ay ka yar tahay 20 maalmood soo bandhigga rasmiga ah ee Galaxy Note 9, the sawirradii ugu horreeyay ee terminal-ka durba waa soo if baxeen.
Cusboonaysiinta amniga ee bisha Luulyo ee Galaxy S8 iyo S8 + ayaa hadda la heli karaa
Sida bil kasta, shirkadda Kuuriya waxay soo saartay server-keeda si ay u cusbooneysiiso taleefannada casriga ah ee ugu wakiillada badan shirkadda ee loogu talagalay Cusboonaysiinta amniga ee u dhiganta bisha Luulyo 2018 ee Samsung Galaxy S8 iyo S8 + ayaa hadda la heli karaa
Tijaabin xawaare la sheegay oo ah Meizu 16 ayaa soo shaac baxday
Heerka dhibcaha ee Meizu 16 ayaa khadka tooska ah looga sii daayay ka hor inta uusan taleefanka si rasmi ah u bilaaban bisha soo socota. Sawirka xaday Imtixaan xawaare ah oo loo maleynayo inuu yahay Meizu 16 oo wata Qualcomm Snapdragon 845 chip ayaa lagu daadiyay shabaqa. Waxaan kuu fidineynaa warka!
Xiinka akhristaha Xiinka ee Samsung Galaxy S10
Waxaa la xaqiijiyay in Samsung Galaxy S10 uu adeegsan doono akhristaha faraha faraha ee ultrasonic, waxaan kuu sheegi doonaa dhammaan faahfaahinta.
Sawirradii ugu horreeyay ee rasmi ah ee Xiaomi Mi Max 3 ayaa halkan yaal
Soo bandhigay sawirradii rasmiga ahaa ee ugu horreeyay ee Xiaomi Mi Max 3. Sawirradii ugu horreeyay ee taleefanka ee nooca Shiinaha ayaa halkan ah
Xiaomi waxay xaqiijineysaa soo bandhigida Mi A2
Boosto cusub oo xayeysiis ah ayaa xaqiijineysa in Xiaomi Mi A2 dhawaan la soo bandhigi doono oo laga yaabo in uusan kali imaan
Alcatel 5V ayaa lagu soo bandhigayaa iyada oo leh laba kamarad iyo qaanuun
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan faahfaahinta Alcatel 5V, aaladda cusub ee loo yaqaan 'Alcatel flagship' ee la timaadda astaamo waaweyn
Huawei Mate 10 iyo P20 waxay heli doonaan GPU Turbo bisha Ogosto
GPU Turbo wuxuu imanayaa Huawei Mate 10 iyo P20 bisha Ogosto. Ka ogow wax badan oo ku saabsan imaatinka cusboonaysiinta taleefoonnada nooca Shiinaha ah.
Huawei wuxuu sii daayaa EMUI 8.1 loogu talagalay Mate 10 iyo Mate 10 Pro
Dhowr toddobaad ka hor, Huawei wuxuu ku dhawaaqay in Mate 10 iyo Mate 10 Pro ay heli doonaan EMUI 8.1 oo hoos imanaya Android 8.1 Oreo bartamaha bishan. Hadda, Huawei horey loo sii daayay wuxuu sii daayay EMUI 8.1, oo ah lakabkeedii ugu dambeeyay ee qaabeynta, oo ka hooseeya Android 8.1 Oreo ee Mate 10 iyo Mate 10 Pro.
Heerka cusub ee soo gelitaanka Samsung wuxuu yeelan doonaa qalabka wax lagu baaro ee loo yaqaan 'iris scanner'
Samsung waxay ku soo bandhigi doontaa akhristaha iris-keeda dhamaadka-dhamaadka-cusub. Raadi wax ku saabsan qorshayaasha ay shirkaddu ku isticmaalayso akhristaha iris taleefannada badan.
MIUI 10 wuxuu gaaraa 21 taleefano cusub oo Xiaomi ah
21 Telefoonada Xiaomi ayaa durbaba cusbooneysiinaya MIUI 10. Soo ogow noocyada lagu helayo cusbooneysiinta lakabka qaabeynta.
Nokia 5.1 Plus ayaa la soo bandhigi doonaa bisha Luulyo 18deeda
Nokia 5.1 Plus ayaa si rasmi ah u imaan doonta 18-ka July. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taariikhda soo bandhigidda ee bartamaha-calaamadda.
Maamulaha guud ee Samsung qeybta mobilada ayaa horey ugu isticmaalay Galaxy Note 9 meel fagaare ah
Bishii Agoosto 9, shirkadda Kuuriya waxay qorsheysay dhacdo ay si rasmi ah ugu soo bandhigi doonto Galaxy Note 9 (sagaal badan oo wada socda ayaan halkaan ku arkaa) Mas'uuliyadda ugu badan ee qaybta mobilada Samsung, DJ Koh, ayaa horeyba loogu arkay Galaxy Note 9 cusub. dadweynaha dhexdiisa, adigoon dhibsanayn inaad qariso wakhti kasta
Xiaomi waxay dib u sii deyneysaa cusbooneysiinta Android Oreo ee Mi A1
Qiyaastii 15 maalmood ka hor, ragga ka socda Xiaomi ayaa lagu qasbay inay ka saaraan adeegeyaashooda cusbooneysiintii ugu dambeysay ee ay u sii daayeen mid ka mid ah shirkadooda Aasiya, ayaa dib u sii daayay cusbooneysiinta Android 8.1 ee xarunteeda A A1, cusbooneysiin ay ahayd ka noqo laba toddobaad ka hor dhibaatooyinka ay soo bandhigtay awgood.
Heshiiska: ZTE wuxuu ka shaqeyn doonaa Mareykanka xaalado kala duwan
Maalmo ka hor, waxaan kugu wargalinay dhamaadka dhibaatada ZTE ee waaxda ganacsiga Mareykanka. Hagaag, tani way ka sii badan tahay, ZTE horeyba wuu u sii wadan karaa ganacsiga Mareykanka, laakiin maahan inuu raaco heshiisyo dhowr ah oo la aasaasay. Waxaan kuu fidineynaa warka!
Vivo NEX S wuxuu maraa tijaabada adkeysiga ugu caansan
Vivo NEX S wuxuu maraa baaritaanka adkeysiga JerryRigEverything. Ka ogow wax intaa ka badan oo ku saabsan tijaabinta iska caabinta ee dhamaadka-sare ee Vivo lagu soo rogay.
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition waxaa la bilaabi karaa July 24
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition waxaa la soo saari doonaa 24-ka July. Raadi wax badan oo ku saabsan imaatinka suurtagalka ah ee dhamaadka-sare ee suuqa usbuuca soo socda.
Huawei Nova 3 iyo Nova 3i waxay imaan doonaan July 26
Huawei Nova 3 iyo Nova 3i waxay si rasmi ah u shaqeyn doonaan 26-ka July. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan imaanshaha moodooyinkan suuqa.
Shaandheeyay qeexitaanka buuxa ee Xiaomi Mi A2 Lite
Xiaomi Mi A2 Lite: Tilmaamaha iyo qiimaha xaday. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan bartamaha-dhexe ee noocyada Shiinaha ee horayba gebi ahaanba loo daadiyay.
Nokia 5.1 Plus wuxuu helaa taariikh soo bandhigid cusub
Nokia 5.1 Plus ayaa la soo bandhigi karaa July 17. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taariikhda cusub ee soo bandhigidda heerka dhexe ee Nokia.
Shaandheeyay qeexitaannada qaar ee Xiaomi Mi Max 3
Xiaomi Mi Max 3: Faahfaahinta koowaad ayaa xaday. Raadi wax badan oo ku saabsan qeexitaannada ugu horreeya ee ka imanaya qaybta 'Xiaomi phablet',
Ciyaartii 'Moto E5 Play with Android Go' ayaa timid Yurub
Moto E5 wuxuu ku ciyaaraa Android Go wuxuu ka bilaabanayaa Europe iyo Latin America. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan imaatinka Motorola-dhamaadka-hoose.
HTC U12 + waa la cusbooneysiiyay iyadoo lagu darayo dhawaq toosan oo toos ah iyo shaqooyin cusub
Xarunta ugu weyn ee HTC ee sanadkan, HTC U12 + waxay bilaabeen inay helaan cusbooneysi cusub oo hagaajinaya toos u soo kicinta qaab muuqaal ah.
OPPO waxay soo bandhigaysaa 40 telefoon oo cusub oo Yurub ah
OPPO waxay guud ahaan Yurub ka bilaabi doontaa 40 telefoon. Ka ogow wax badan oo ku saabsan qorshayaasha soo saaraha Shiinaha inay ku soo bandhigaan moodooyin cusub Yurub.
Xiaomi Mi 8, Mi A2, Mi Max 3 iyo Pocophone F1 ayaa ka diiwaan gashan Yurub
Xiaomi waxay shahaado siisay dhowr taleefan oo loogu talagalay in laga bilaabo Yurub. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qorshooyinka astaanta ee lagu bilaabayo moodooyinkaas.
Honor 10 wuxuu iibiyey 3 milyan oo unug adduunka oo dhan
Honor 10 wuxuu horey u iibiyay in kabadan 3 milyan oo unug. Ka ogow wax badan oo ku saabsan guusha taleefanka shirkadda soo saare Honor uu ka haysto adduunka oo dhan.
OnePlus waxay cusbooneysiineysaa codsigeeda Gallery-ka oo noo oggolaanaya inaan yareyno fiidiyowyada oo aan ku darno muusikada asalka ah
OnePlus waxay bilawday inay cusbooneysiiso cusbooneysiinta arjiga Gallery ee loogu talagalay boosteejooyinkeeda ku darista shaqooyinka cusub
Samsung waxay ku soo bandhigi kartaa Galaxy Watch IFA 2018
Samsung Galaxy Watch waxaa lagu soo bandhigi karaa IFA 2018. Ka raadi waxbadan oo ku saabsan taariikhda soo bandhigga ee saacadda shirkadda Kuuriya.
Sony Xperia XZ2 Premium ayaa laga bilaabi doonaa Spain bisha Ogosto
Sony Xperia XZ2 Premium waxaa laga bilaabi doonaa dhamaadka bisha Ogosto gudaha Spain. Raadi wax badan oo ku saabsan imaatinka-dhamaadka sare ee Sony ee suuqa Isbaanishka.
Sawirka ugu horreeya ee xayeysiinta ee Galaxy Note 9 waa la sifeeyey
Sawirkii ugu horreeyay ee waxa ka mid noqon doona dhiirrigelinta Galaxy Note 9 ayaa la soo daadiyay oo noo oggolaaneysa inaan aragno naqshadda cusub ee xaruntan.
Shaandheeyay Xiaomi Mi A2 Lite cusub
Xiaomi Mi A2 Lite: Taleefanka cusub ee Xiaomi oo wata Android One. Ka raadi taleefankan cusub magaca Shiinaha ee la socon doona Mi A2.
Galaxy Note 9 ayaa la iibin doonaa bisha Ogosto 24
Samsung Galaxy Note 9 ayaa la iibin doonaa 24 Ogosto. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taariikhda la bilaabayo taleefanka sumadda Kuuriya.
Cusboonaysiinta amniga ee bisha Luulyo ee loogu talagalay Galaxy J6 ayaa hadda laga heli karaa Spain
Cusboonaysiinta ugu horreysa ee amniga ee loo yaqaan 'Galaxy J6' ayaa hadda laga heli karaa in laga soo dejiyo Spain iyo Talyaaniga, iyada oo ay tahay waddammadii ugu horreeyay ee hela.
Sony Xperia XA2 Plus: Nooca cusub ee bartamaha
Sony Xperia XA2 Plus: Qeexitaannada, qiimaha iyo bilaabista. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee dhexdhexaadka ah nooca Jabbaan.
Xiaomi Mi Max 3 waxaa la soo bandhigi doonaa July 19
Xiaomi Mi Max 3 waxaa la soo bandhigi doonaa July 19. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taariikhda soo bandhigida taleefanka cusub ee Shiinaha.
LG Q7: LG dhex-dhexaadkiisa cusub ayaa yimid Spain
LG Q7 waxaa si rasmi ah looga bilaabay Spain. Ka ogow wax badan oo ku saabsan imaatinka bartamaha cusub ee shirkadda si rasmi ah Spain
Soo bandhigida Nokia 5.1 Plus ayaa dib loo dhigay
Soo bandhigida Nokia 5.1 Plus waa la joojiyay. Raadi wax badan oo ku saabsan baajinta dhacdadan oo aan sugi doonno si aan u ogaanno lambarka taleefanka.
Xiaomi waxay dukaan ka furi doontaa Zaragoza bisha Luulyo 14deeda
Xiaomi waxay ku dhawaaqeysaa furitaanka dukaankeeda Zaragoza bisha Luulyo 14. Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan dukaanka cusub ee Shiinaha ee ku yaal Spain.
Galaxy A8 iyo A8 + (2018) waxay bilaabayaan inay helaan Android 8.0 Oreo
Galaxy A8 iyo A8 + (2018) ayaa cusbooneysiiyay Android 8.0 Oreo. Raadi wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta bilaabeysa inay gaarto labada nooc ee Samsung.
Soo bandhigtay sawirkii ugu horreeyay ee rasmi ah ee Galaxy Note 9
Waxay soo bandhigtay naqshadda Galaxy Note 9 muuqaalkeedii ugu horreeyay ee rasmi ah. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan sawirka koowaad ee Samsung-dhamaadka sare ee cusub.
Nokia 5.1 Plus waa la dusiyey: Shaashad leh shaashad iyo laba kamarad
Kala shaandheeyay naqshadda Nokia 5.1 Plus kahor intaan lasoo bandhigin. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan aagga dhexe ee cusub ee Nokia.
Nubia, oo ah shirkadda ZTE, waxay umuuqataa inay diyaarineyso calankeeda xiga. Kani waa Nubia Z18, oo ah heer sare oo leh qeexitaanno farsamo oo Nubia Z18 ay dhowaan kasoo muuqatay Geekbench, taas oo nooga reebaysa xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan qeexitaankeeda muhiimka ah Soo ogow!
LG Q6 wuxuu bilaabaa inuu helo Android 8.0 Oreo
LG Q6 wuxuu helayaa cusbooneysiinta Android 8.0 Oreo. Isticmaalayaasha Kuuriyada Koonfureed waxay si lama filaan ah u helaan cusbooneysiinta Android Oreo.
Toddobo nooc oo Huawei ah ayaa durbaba qaata EMUI 8.0 oo ku saleysan Android 8.0 Oreo
Huawei wuxuu dhawaan ku dhawaaqay sii-deynta cusbooneysiinta toddobada nooc ee soo bandhigi doona EMUI 8.0 oo ku saleysan Android 8.0 Oreo. Huawei wuxuu ku dhawaaqay in 7 ka mid ah noocyadeeda ay heli doonaan EMUI 8 oo ku saleysan Android 8.0 Oreo. Waxaan kuu fidineynaa warka!
Codsiga kalandarka Samsung wuxuu hadda kuu oggolaanayaa inaad ku darto istiikarka ballamaha
Samsung waxay sii wadi doontaa cusbooneysiinta barnaamijyadeeda iyada oo lagu darayo shaqooyinka xarumaha hore ee laga heli karo Galaxy S9
Samsung ayaa dhaaftay Apple suuqa ganacsiga Netherlands
Samsung-ka caalamiga ah ee Samsung wuxuu ku guuleystey inuu dhaafo hal sano oo keliya, illaa iyo hadda, shirkadda ku taal Cupertino ee Apple ee suuqa ganacsiga
Vivo Nex wuxuu bilaabi doonaa inuu si caalami ah u bilaabo bishan
Vivo NEX wuxuu ka bilaabmi doonaa meel ka baxsan Shiinaha bishaan. Raadi wax badan oo ku saabsan waddamada aad ka iibsan karto taleefanka.
Huawei TalkBand B5 waxaa la soo bandhigi doonaa July 18
Huawei wuxuu soo bandhigi doonaa Huawei TalkBand B5 bisha Luulyo 18. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taariikhda soo bandhigida ee jijin cusub ee sumadda Shiinaha.
Xiaomi waxay ku shaqeysaa taleefan cusub oo heer sare ah
Pocophone: Magaca cusub ee Xiaomi ee Hindiya. Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan sumaddaan 'Xiaomi' si aad taleefannada uga bilowdo Hindiya.
Xiaomi waxay soosaartay nooc cusub oo ka mid ah Xiaomi Redmi 6A
Xiaomi Redmi 6A: Nooc cusub oo laga bilaabay Shiinaha. Waxbadan ka ogow nooca cusub ee taleefanka laga furayo Shiinaha maanta.
Nokia 3.1 ayaa si rasmi ah u yimid Spain
Nokia 3.1 waxaa si rasmi ah looga bilaabay dalka Spain. Ka ogow waxbadan oo ku saabsan daahfurka qadka dhexe ee rasmiga ah dalkeena.
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Samsung Experience waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay wareegaan shaashadda Galaxy S8
Samsung ayaa soo saartay cusbooneysiin cusub oo ku saabsan lakabka u-habeynta Samsung Experience kaasoo kuu oggolaanaya inaad wareejiso shaashadda guriga iyo menus
10ka Telefoonada ugu awooda badan bisha Juun 2018, Sida laga soo xigtay AnTuTu Benchmark
Mid ka mid ah calaamadaha ugu caansan, caanka ah ee lagu kalsoon yahay ee adduunka Android waa shaki la'aan AnTuTu. Waana iyada oo ay weheliyaan GeekBench iyo kuwa kale, wuu ogyahay kuwaas oo ah kuwa casriga ah ee ugu awoodda badan bisha Juun iyada oo ay ugu wacan tahay liistada uu muujiyay Antutu Benchmark. Baro iyaga!
Huawei wuxuu rukhsad u leeyahay smartwatch kaas oo kuu oggolaanaya inaad keydiso dhagaha
Huawei wuxuu rukhsad u leeyahay smartwatch kaas oo kuu oggolaanaya inaad keydiso dhagaha. Raadi wax badan oo ku saabsan patent-ka cusub ee sumadda Shiinaha.
Samsung waxay furaysaa warshad soo saarista taleefannada ugu weyn adduunka
Samsung waxay daah furtay warshaddii ugu weyneyd ee soo saarista taleefannada adduunka. Waxbadan ka ogow xaruntan wax soosaarka Samsung ee Hindiya.
Shaandheeyey noocyada kala duwan ee Xiaomi Mi A2
Noocyada kala duwan iyo midabbada ee uu Xiaomi Mi A2 suuqa ku dhufan doono bilowgeeda dhammaadka bisha ayaa durba la sii daayay.
Xiaomi waxay ka furan doontaa dukaamo cusub magaalooyinka Valencia iyo La Coruña
Xiaomi waxay ku dhawaaqeysaa dukaamo cusub oo ku kala yaala Valencia iyo La Coruña. Raadi wax badan oo ku saabsan dukaamada cusub ee sumadda Shiinaha ee iman doona Spain.
Nokia 8810 ayaa isticmaali doona WhatsApp
Nokia 8810 waxaa laga yaabaa inuu haysto WhatsApp. Raadi wax badan oo ku saabsan imaatinka arjiga farriinta ee taleefanka sumadda.
Qiimaha Xiaomi Mi Mix 3 ayaa la muujiyay
Qiimaha Xiaomi Mi Mix 3 ayaa la shaaciyay. Ogow wax intaa ka badan oo ku saabsan qiimaha noocyada taleefanka cusub ee Xiaomi yeelan doonaan.
OPPO A5 wuxuu bilaabmi doonaa 13 Luulyo
OPPO A5: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista rasmiga ah. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee sumadda Shiinaha ee la bilaabay 13-kii Luulyo,
Nokia X5 waxaa la soo bandhigi doonaa July 11
Nokia X5 ayaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa 11-ka July. Raadi wax badan oo ku saabsan soo bandhigida taleefanka cusub ee sumadda.
Xanta cusub ee Samsung Galaxy S10 oo leh sedex kamarad
Waxaa jira warar xan cusub oo ku saabsan kala duwanaanta saddexda-kamarad ah ee Galaxy S10, waxaan kuu sheegeynaa faahfaahinta halabuurkan sawir qaadista ah
Nokia X6 ayaa si caalami ah u soo bandhigi doona 19-ka bisha Julaay, iyadoo loo yaqaan Nokia 6.1 Plus
Nokia X6 wuxuu ka bilaabanayaa meel ka baxsan Shiinaha 19-ka July as Nokia 6.1 Plus. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan bilawga taleefanka Nokia.
Sharafta Sharafta 10 ayaa la imaan doonta shaashad dhan 6,9-inji
Qeexitaannadii ugu horreeyay ee la sifeeyay ee Xusuusta Sharafta 10. Faahfaahin dheeraad ah ka ogow astaanta cusub ee sumadda Shiinaha ee suuqa soo gali doonta sannadkan.
Xiaomi Mi Max 3 ayaa la soo bandhigi karaa bishan
Xiaomi Mi Max 3 si rasmi ah ayaa loo soo bandhigi karaa bisha Luulyo. Raadi wax badan oo ku saabsan imaatinka taleefanka cusub ee Shiinaha ee suuqa bishaan.
Samsung waxay shatiyadeysay nidaam aqoonsi wajiga oo horumarsan
Samsung waxay xiratay nidaam aqoonsi weji sare leh. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan rukhsadda cusub ee shirkadda Kuuriya.
Huawei P9 iyo P9 Lite uma cusbooneysiin doonaan Android Oreo
Ma jiri doono Android Oreo oo loogu talagalay Huawei P9 iyo P9 Lite. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan cusbooneysiinta taleefannada aan ugu dambeyn imaan doonin.
Moto Z3 Play waxaa laga bilaabi doonaa Spain bisha Ogosto
Moto Z3 Play: Qiimaha iyo taariikhda bilaabida ee Spain waa la xaqiijiyay. Ka ogow waxbadan oo ku saabsan daahfurka taleefanka Motorola gudaha Isbaanish.
OPPO waxay rukhsad u siisay saddex telefoon oo isku laaban
OPPO waxay sharciyeysay seddex telefoon oo isku laaban oo kala duwan. Raadi wax badan oo ku saabsan shatiyadaha cusub ee sumadda taleefanka ee laaban karo ee Shiinaha.
LG wuxuu ku shaqeyn lahaa taleefan isku laaban
LG waxay mar horeba rukhsadaysay taleefankeedii ugu horreeyay ee isku laaban. Shirkadda Kuuriya waxay durbaba ka shaqeyneysaa taleefankeedii ugu horreeyay ee isku laaban, kaas oo ay horeyba si rasmi ah u sharciyeysteen.
Galaxy X iyo Galaxy S10 waxay beddelaan taariikhda bandhiga
Taariikhda soo bandhigida ee Galaxy X iyo Galaxy S10 waa la beddelay. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taariikhaha cusub ee la sii deynayo ee moodooyinka Samsung.
Tani waa waxa kiisaska ugu horreeya ee Galaxy Note 9 u eg yihiin
Kiisaskii ugu horreeyay ee Samsung Galaxy Note 9 horey ayaa loo sii daayay, kiisas xaqiijinaya naqshadeynta mustaqbalka Samsung ee xiga
Xiaomi Mi MIX 3 wuxuu lahaan lahaa kamarad iskeed u socota
Xiaomi Mi MIX 3 wuxuu lahaan lahaa kamarad iskeed u socota. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qorshayaasha sumadda Shiinaha ee ah in nidaamkan loogu isticmaalo taleefanka.
Oukitel K8: qeexitaannada iyo astaamaha
Calaamadda cusub ee soo saaraha Aasiya Oukitel, K8 ayaa suuqa soo gali doonta dhammaadka bisha Luulyo. Intii aan ku tusinayno waxa ay yihiin qeexitaannada ugu dambeeya
Xiaomi waxay ku shaqeysaa taleefan casri ah oo loogu talagalay Mareykanka
Xiaomi ayaa telefoon u soo bandhigi doonta Mareykanka oo keliya. Ka ogow wax badan oo ku saabsan soo galitaanka sumadda Shiinaha ee suuqa Mareykanka.
Cusboonaysiinta 'Android Oreo' ee Galaxy J3 2017, J5 2017 iyo J7 2017 waa la daahiyay
Cusbooneysiinta la filayo ee Galaxy J3, Galaxy J5 iyo Galaxy J7 2017 ayaa dib loo dhigi doonaa dhowr bilood illaa bisha Sebtember
Galaxy Note 9 wuxuu ku imaan doonaa shan midab oo kala duwan
Samsung Galaxy Note 9 waxaa lagu heli doonaa shan midab. Raadi wax badan oo ku saabsan midabada loo doortay suuqgooda.
OnePlus 5 iyo 5T horeyba waxay ula jaan qaadeen Mashruuca Mashruuca
OnePlus 5 iyo 5T horeyba waxay uheleen taageerada Mashruuca Treble. Raadi wax badan oo ku saabsan beta-ka cusub ee ku daraya taageerada labada telefoon ee astaanta.
Taleefanka Samsung ee isku laaban wuxuu yeelan doonaa baytari isku laaban
Taleefanka Samsung ee isku laaban ayaa isticmaali doona baytari isku laaban. Raadi wax badan oo ku saabsan batteriga Samsung Galaxy X uu isticmaali doono.
Calaamadda Galaxy Note 9 oo leh astaan ​​Exynos 9810
Halbeeg cusub ayaa lagu sifeeyay Geekbench halkaas oo aan ka arki karno sida waxqabadka Galaxy Note 9 uu ula mid yahay kii Galaxy S9 +, isla processor-kii.
Sawirro cusub oo ka mid ah Motorola One ayaa soo ifbaxay
Sawirro cusub oo ah nooca Motorola One ayaa ka soo muuqanaya goobta, iyagoo haatan wata midab cad, tani ma waxay noqon doontaa nooc kale oo aaladda ah?
Samsung Go Android kii ugu horreeyay wuxuu la imaan doonaa Samsung Experience
Taleefanka Samsung ee wata Android Go wuxuu lahaan doonaa Samsung Experience. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefankan nooca Kuuriya ee dhowaan soo socda.
Meitu MP1710 wuxuu maraa TENAA oo kuwani waa astaamaheeda muhiimka ah
Meitu, oo ah shirkadda Shiinaha ee la aasaasay 2008, waxay umuuqataa inay horeyba uheshay terminal cusub sababo laxiriira marinkeedii udambeeyay ee ay soo martay TENAA, jaangooyaha iyo The Meitu MP1710 ee TENAA waxayna muujineysaa astaamaheeda iyo tilmaamaha farsamo ee ugu muhiimsan. Waan kula socodsiinaynaa
Maamulaha Meizu wuxuu sheegay in Meizu 16 uu imaan doono dabayaaqada bisha Luulyo ama horaanta bisha Ogosto
Waqtigaan la joogo, Meizu 16 waa aaladaha sida weyn loo sugayo ee shirkadda, iyagoo abuuraya xan iyo mala awaal aan dhammaad lahayn oo Jack Wong, Maamulaha guud ee Meizu, ku tilmaamay in Meizu 16 uu imaan doono bilowga bishaan Ogosto ama dhamaadka bishan. . Waan kuu balaarinay!
Honor 10 GT, mobiil leh 8GB RAM iyo processor Kirin 970. Waan kuu soo bandhigeynaa!
Waxaan leenahay heer sare oo cusub! Dhowr saacadood ka hor, Huawei waxay soo bandhigtay Honor 10 GT oo ah taleefankeedii ugu horreeyay ee leh 8GB xasuusta RAM ah sida Honor 10 GT waa halkan! Qalabkan waxaa badanaa lagu gartaa inuu yahay moobilkii ugu horreeyay ee shirkadda leh 8GB RAM. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay GPU Turbo.
Dib u eeg Xiaomi Mi Band 3
Cilad ku jirta Vivo NEX waxay sababtaa kaamirada lagalaaban karo inay shaqeyso digniin la'aan
Dhawaan, Vivo waxay soo saartay Vivo NEX, oo ah heer sare oo leh kaamerad lagalaaban karo oo meesha ka saartay baahida shirkadu u qabto hirgalinta nashqadda caanka ah ee caanka ah. Waan kuu balaarinay!
Sida loo dhigo Xiaomi Mi Band 3 oo Isbaanish ah
Vivo Z1i: Nooca cusub ee bartamaha Shiinaha
Vivo Z1i: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista rasmiga ah. Ka ogow wax badan oo ku saabsan bartamaha-dhexe ee noocyada Shiinaha ee dhowaan la soo bandhigi doono.
Huawei Nova 3 waxaa la soo bandhigi doonaa July 18
Xaqiijiyay: Huawei Nova 3 waxaa la soo bandhigi doonaa July 18. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan bilawga taleefanka cusub ee Shiinaha.
Bixiyaha ugu horreeya ee Samsung Galaxy Tab S4 waa la sifeeyey
Sawirka ugu horreeya ee waxa uu noqon doono jiilka afraad ee Galaxy Tab S, ayaa hadda la sifeeyey oo na tusaya looxyo ka khafiifsan kuwii ka horreeyey.
Waxyaabaha Huawei Nova 3 ayaa shaaca ka qaaday TENAA
Huawei mar hore ayuu leeyahay bedelka Nova 2, oo ah bartamihiisa kala duwan oo la bilaabay sanadkii hore, waana dabcan, Huawei Nova 3. Qalabkan waxaa lagu soo daadiyay TENAA Huawei Nova 3 ayaa soo martay TENAA waana hore u ogaanay naqshadeynta iyo astaamaha ugu muhiimsan. Waan kuu sheegeynaa!
HTC waxay shaqada ka joojisay 22% shaqaalaheeda
Shirkadda laga leeyahay dalka Taiwan ee HTC ayaa shaaca ka qaaday inay heshiis la gaadhay oo ah inay 22% ka joojiso shaqaalaheeda adduunka oo dhan.
Huawei Y5 (2018) waxaa si rasmi ah looga bilaabay Spain
Huawei Y5 (2018) hadda waxaa laga heli karaa Spain. Ka ogow wax badan oo ku saabsan soo saarista taleefanka cusub ee Shiinaha ee waddankeenna.
Xiaomi wuxuu joojiyaa cusbooneysiinta Android 8.1 Oreo ee Xiaomi Mi A1
Kala noqoshada cusbooneysiinta Android 8.1 Oreo ee Xiaomi Mi A1. Waxbadan ka ogow khaladaadka soo kordhay ee keenay in laga baxo.
The OnePlus 6 oo ku jira lava red ayaa hadda rasmi ah
OnePlus 6 oo ku jira lava red horay ayaa loo soo bandhigay. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan nooca cusub ee dhammaadka-dhamaadka ah ee sumadda Shiinaha ee lava red.
S-Pen ee Galaxy Note 9 ayaa kuu oggolaan doonta inaad xakameyso taleefanka
S-Pen ee Samsung Galaxy Note 9 wuxuu soo bandhigi doonaa Bluetooth. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan isbeddelada ay keeni doonaan stylus-dhamaadka sare.
Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku Khaaska Gaarka ah wuxuu gaarayaa 1,67 milyan
Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku Special Edition wuxuu leeyahay 1,67 milyan boos celin. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan guusha daabacaaddan gaarka ah ee taleefanka.
Huawei P10 Lite iyo Mate 10 Lite ayaa cusbooneysiinaya Android 8.0 Oreo
Android 8.0 Oreo waxay u timaadaa Huawei P10 Lite iyo Mate 10 Lite. Raadi wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta bilaabeysa inay gaarto taleefannada soo saaraha.
On July 2, cusub OnePlus 6 waxaa lagu dhawaaqi karaa casaan
OnePlus wuxuu ku dhawaaqi karaa midab cusub oo ku dhex jira aagga OnePlus: casaan.
Cusboonaysiinta Xiami Mi A1 ee Android Ore 8.1 hadda waa la heli karaa laakiin dhibaatooyin leh
Dhammaan cusbooneysiinta ay soo saarayaashu u soo bandhigaan aaladooda moobaylka, hore waxay u maraan wajiga beta, wajiga ...
MIUI 10 Global Beta: liiska taleefannada Xiaomi ee la jaan qaadi doona iyo taariikhda la cusbooneysiin doono
Bilowga bisha, waxaan kugula socodsiinay liiska rasmiga ah ee Xiaomi na siisay taas oo u muuqatay aaladaha mobilada ee noqon doona Xiaomi ayaa shaaca ka qaaday liis cusub oo qalab ah oo la jaan qaadaya MIUI 10 Global Beta. Ogow taariikhdooda cusboonaysiinta ee kala ah!
Xiaomi waxay Spain ka furi doontaa laba dukaan oo cusub bisha July 7deeda
Xiaomi waxay Spain ka furi doontaa laba dukaan oo cusub bisha July 7deeda. Ka ogow wax badan oo ku saabsan dukaamada ay sumcadda Shiinaha ka furan doonto Spain toddobaad gudihiis.
Dib u eegista muuqaalka Moto G6, «Soo laabashada Boqorka»
Huawei wuxuu ku dhawaaqay hawlgalinta tiknoolajiyada GPU Turbo iyo liiska qalabka la taageeri doono
Huawei wuxuu ku dhawaaqay tiknoolajiyadda GPU Turbo horaantii bishaan. Teknolojiyadaan, oo ku saleysan hagaajinta barnaamijka softiweerka iyo qalabka, Huawei wuxuu xaqiijinayaa keenista tiknoolajiyada GPU Turbo iyada oo loo marayo cusbooneysiin ay ku jiraan Huawei iyo Honor phones.
Nubia Z18S, telefoonka xiga ee ZTE oo leh shaashad laba-gees ah
Nubia Z18S, ayaa markale kasoo muuqatay xogaha, laba shaashad la’aan kamarad hore, waxaan kuu sheegeynaa faahfaahin dheeri ah
Shirkadda Huawei ayaa cusbooneysiin doonta taleefannadooda labadii biloodba mar
Huawei wuxuu ballan qaadayaa inuu cusboonaysiin doono taleefannadiisa labadii biloodba mar Raadi wax badan oo ku saabsan ballanqaadka sumadda si loo cusbooneysiiyo qalabkiisa.
Huawei wuxuu cusbooneysiin doonaa toddobo taleefan Android Oreo
Toddoba taleefannada Huawei iyo Honor ayaa cusbooneysiin doona Android Oreo. Raadi wax badan oo ku saabsan moodooyinka cusub ee heli doona cusbooneysiintan.
Huawei wuxuu bilaabi lahaa taleefankii ugu horreeyay ee 5G bisha Juun 2019
Telefoonkii ugu horreeyay ee Huawei oo leh 5G wuxuu imaan doonaa Juun 2019. Ogow wax badan oo ku saabsan taleefankan ay Huawei dooneyso inay ku xoojiso 5G.
OnePlus wuxuu ballan-qaadayaa inuu ku soo bandhigo cusbooneysiin muddo saddex sano ah taleefannadiisa
OnePlus ayaa siin doona cusbooneysiin muddo saddex sano ah taleefannadooda. Ka raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan xayeysiiska nooca sumadda leh ee ballan qaadaya inuu cusbooneysiinayo.
Motorola waxay ku dhawaaqeysaa dhacdo 2 Ogosto
Motorola waxay soo bandhigi doontaa taleefano cusub Ogosto 2. Raadi wax badan oo ku saabsan dhacdada ay shirkaddu u diyaarisay bisha Ogosto.
Xiaomi waxay ku iibisay 5 milyan oo cutub oo ka mid ah Redmi Note 5 iyo Redmi Note 5 Pro gudaha Hindiya muddo 4 bilood gudahood ah
Xiaomi, oo ka mid ah shanta shirkadood ee soo saara taleefannada gacanta, ayaa ku guuleysatay inay iibiso ilaa shan milyan oo unug oo ka tirsan shirkadda Redmi Note 5 iyo shirkadda la yidhaa Redmi Note 5 ProXiaomi, oo laga leeyahay dalka Shiinaha. Xiaomi Redmi Xusuusin 5 Pro gudaha Hindiya.
Sony waxay xireysaa howlaheeda Bariga Dhexe, Afrika iyo Turkiga bisha Oktoobar
Sony waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay mid ka mid ah shirkadaha wax soo saarka casriga ee ugu caansan muddo dheerna soo jiray tan iyo markii la aasaasay. Tani waxay ka dhigan tahay Sony inay xiri doonto howlaheeda Turkiga, Afrika iyo Bariga Dhexe bisha soo socota ee Oktoobar. Tani waa waxa uu tilmaamay Evan Blass. Waanu kugu balaarinay!
ISOCELL Plus: Tiknoolajiyadda cusub ee Samsung ee lagu hagaajinayo sawirrada xaaladaha iftiinka yar
Shirkadda Samsung ayaa hadda soo bandhigtay tikniyoolajiyad cusub oo loogu magac daray ISOCELL Plus. Tani waa hagaajinta ISOCELL oo lagu dabaqay dareemayaasha CMOS-ka oo ay soo bandhigtay shirkadda Samsung ayaa hada soo bandhigtay tikniyoolajiyad cusub oo la yiraahdo ISOCELL Plus. Tani waa kobcinta ISOCELL oo ay shirkaddu soo bandhigtay sanado ka hor.
Wuxuu shaaca ka qaaday qiimaha iibka ee Xiaomi Mi Max 3
Xiaomi Mi Max 3 wuxuu yeelan doonaa qiimaha tafaariiqda oo ah 1.699 yuan. Raadi wax badan oo ku saabsan qiimaha taleefanka cusub ee sumadda Shiinaha yeelan doonaan.
Taleefanka ugu fiican ee Nokia ayaa imaan doona IFA 2018
Taleefanka ugu fiican ee Nokia waxaa lagu soo bandhigi doonaa IFA 2018. Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan nooca cusub ee sumadda ee imaan doona qeybta labaad ee sanadka.
Xiaomi Mi A2 waxaa cadeeyay Taiwan NCC
Xiaomi horeyba waxay umuuqataa inay diyaarisay Xiaomi Mi A2, qeybta dhexe ee xiga ee shirkada. Qalabkan, ka dib markii lagu caddeeyey Singapore, wuxuu helayaa Xiaomi Mi A2 oo laga caddeeyey Taiwan NCC. Intaas waxaa sii dheer, sida ku cad daabacaadda lagu siiyay madasha shirkadda, waxaa la soo bandhigi doonaa July 24.
Cusbooneysiinta amniga ee ugu dambeysay ee Galaxy S9 waxay dhaqaajineysaa jaangooynta siineysa helitaanka raadiyaha FM-ka ee boosteejooyinkan.
Jack Wong, Maamulaha guud ee Meizu, wuxuu dareemayaa kalsooni aad u badan oo ku saabsan sida awooda Meizu X8 u noqon doono, aaladda soo socota ee shirkadda soo socota, sida uu sheegay Meizu CEO Jack Wong, Meizu X8 wuxuu aad uga fiicnaan doonaa Meizu X8. 710 SE, qalabkii ugu horreeyay ee Xiaomi oo leh Snapdragon XNUMX.
Xaqiijiyay: Galaxy Note 9 waxaa la soo bandhigay Ogosto 9
Waa rasmi: Galaxy Note 9 waxaa la soo bandhigayaa Ogosto 9. Kadib toddobaadyo xan ah, waxaa la xaqiijiyay in Samsung-dhamaadka sare la soo bandhigo maanta
Meizu 16 ayaa la bilaabi doonaa sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, ayuu sheegay agaasimaha guud ee shirkadda
Maamulaha guud ee shirkadda Meizu, Jack Wong, ayaa waxyaabo u yara nooleeyay taageerayaasha shirkadda, isaga oo sheegay in Meizu 16-ka ay sida ugu dhakhsaha badan u iman doonaan.
Xiaomi Mi Band 3 waxay iibisaa hal milyan oo maalmood 17 maalmood
Xiaomi Mi Band 3 ayaa gaaraya hal milyan oo unug oo la iibiyay. Raadi wax badan oo ku saabsan guusha jiilka cusub ee jijimooyinka Xiaomi ee Shiinaha.
Dhacdada cusub ee Xiaomi bishii Luulyo 24: Xiaomi Mi A2 ayaa timid
Xiaomi Mi A2 waxaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa July 24. Raadi wax badan oo ku saabsan taariikhda soo bandhigida taleefanka cusub ee sumadda.
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee LG G7 waxay noo ogolaaneysaa inaan ku duubno fiidiyowyo 4k 60 fps
Shirkadda LG ee loo yaqaan 'G7' ayaa heli doonta cusbooneysiin u oggolaan doonta inay duubto fiidiyoow 4k ah 60 fps
LG V40 wuxuu lahaan karaa shan kamaradood wadar ahaan
LG V40 wuxuu soo bandhigi doonaa wadar ahaan shan kamaradood. Ka ogow wax badan oo ku saabsan dhamaadka-sare-ka cusub ee LG ee ku sharxi doona sida ugu fiican dhanka kamaradaha.
Oukitel wuxuu ku sharraxaa naqshad dhaqameedka Oukitel K8
Terminalka soo socda ee Oukitel soo bandhigi doono waa K8, terminal leh naqshad dhaqameed, shaashad 6-inji ah iyo batari 5000 mAh
Meizu's mBack ma socdo inkasta oo shirkaduhu soo socdaan taleefannada bezel-ka yar
Furayaasha marin-u-helka jirka ee akhristayaasha faraha isku dhafan ayaa ahaa habka aqoonsiga ee xulashada isticmaaleyaal badan kahor inta Meizu uusan ku talo-jirin inuu macsalaameeyo teknolojiyaddiisa mBack inkasta oo taleefannada soo socda ay imaan doonaan bilaa beel. Tani waa waxa uu tilmaamay agaasimaha guud.
Shaandhaynta qeexitaanka cusub ee Xiaomi Mi Max 3
Xiaomi wuxuu bilaabi lahaa laba nooc oo ka mid ah Xiaomi Mi Max 3. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan labada nooc ee suurtogalka ah ee taleefankeeda cusub.
Noocyo kala duwan oo Nokia ah ayaa wajihi doona furitaan
Nokia ayaa wajihi doonta furitaanka dhowr taleefanadeeda. Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan cusbooneysiintan goor dhow taleefannadan.
Samsung ayaa cusbooneysiin doonta dhowr ka mid ah taleefannadeeda Android Oreo bisha July
Samsung ayaa cusbooneysiin doonta dhowr nooc oo ku saabsan Android Oreo bisha Luulyo. Raadi wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta imanaya taleefannada Samsung hadda.
Samsung Galaxy S10 wuxuu la imaan lahaa nooc leh kamarad saddex-laab ah
Galaxy S10 wuxuu lahaan lahaa nooc leh kamarad saddex-geesood ah. Waxbadan ka ogow dhamaadka-sare ee shirkadda Kuuriya iyo kamaraddeeda dambe ee saddex-geesoodka ah.
Xiaomi Redmi 6 Pro hadda waa rasmi, ogow dhammaan astaamaheeda
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan faahfaahinta rasmiga ah ee Xiaomi Redmi 6 Pro, qiimaha iyo helitaanka suuqa adduunka
Lagu shaandheeyey qeexitaannada ugu horreeya ee Samsung ee leh Android Go
Samsung Galaxy J2 Core: Qaabka ugu horreeya ee Android Go Samsung. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qeexitaannada qaab-dhismeedka hoose-dhexe,
Nokia 5.1 ayaa ka bilaabmi doona Yurub bisha July
Nokia 5.1 ayaa imaan doonta Yurub bisha July. Ka ogow wax badan oo ku saabsan soo saarista taleefanka cusub ee nooca ee hadda lagu keydin karo Ruushka.
Xiaomi Mi Pad 4: Kiniiniga cusub ee sumadda Shiinaha
Xiaomi Mi Pad 4: Qeexitaannada, qiimaha iyo bilaabista. Raadi wax badan oo ku saabsan kiniinka cusub ee sumadda Shiinaha ee maanta la soo bandhigay.
Baytariga OnePlus 6 si dhaqso leh ayuu u daadanayaa. Ka ogow wax badan oo ku saabsan guuldaradan soo socota kadib cusbooneysiinta cusub ee OxygenOS illaa heerka sare,
Iibinta Samsung waxay ka hoos mari doontaa filashooyinka. Raadi wax badan oo ku saabsan iibka shirkadda oo ka hooseeya filashooyinka.
Bisha June ee balastarka amniga ee Galaxy S9 iyo S9 + oo hadda la heli karo
Galaxy S9 iyo S9 + cusbooneysiinta amniga ee bisha Juun 2018 ayaa hadda loo heli karaa in laga soo dejiyo Yurub.
Samsung Dex Pad ee Galaxy S9 ayaa hadda laga heli karaa Spain
Qalabka aan ku beddeli karno Galaxy S8, S9 iyo Note 8 oo aan u rogi karno kombiyuutar si aan ugu adeegsanno kumbuyuutar iyo shaashad
Xiaomi Mi 8 wuxuu gaarayaa hal milyan oo unug oo la iibiyay
Xiaomi Mi 8 ayaa iibiya hal milyan oo unug laba toddobaad gudahood. Ka ogow waxbadan oo ku saabsan guusha taleefanadan suuqa Aasiya.
Alcatel 1: Nooca gelitaanka cusub ee leh Android Go
Alcatel 1: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista rasmiga ah. Ka ogow wax badan oo ku saabsan noocyada cusub ee soo-galidda ee 'Android Go'.
Xanta cusubi waxay sheegaysaa in Samsung Galaxy S10 aanu yeelanayn qalabka wax lagu baaro ee loo yaqaan 'iris scanner'
Xanta Samsung Galaxy S10 way sii socotaa, hadda wax walba waxay umuuqdaan inay muujinayaan in qalabka wax lagu baaro ee loo yaqaan 'iris scanner' laga tirtiri doono qaab kale.
Nokia X6 oo midab buluug ah laga bilaabay Shiinaha
Nokia X6 wuxuu ka bilaabanayaa Shiinaha midab buluug ah oo cusub. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan nooca cusub ee taleefanka ee horay looga bilaabay Shiinaha.
Lenovo Tab 4 wuxuu cusbooneysiin doonaa Android 8.1 Oreo bisha Nofeembar. Raadi wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta ku soo socota kiniiniyadan.
Shaashadda amniga ee bisha lixaad ee Galaxy Note 8 oo hadda laga heli karo Yurub
Cusboonaysiinta amniga ee boosteejooyinka ay maamusho Android waa xaqiiqo jirta oo aan cidina iska indha tiri karin, in kastoo ...
Samsung waxay horey u tijaabisay taleefankeedii ugu horreeyay ee Android Go
Telefoonkii ugu horreeyay ee Samsung oo wata Android Go wuxuu ku jiraa marxaladda tijaabada. Raadi wax badan oo ku saabsan tijaabooyinka ay sumaddu ku samaynayso taleefankan.
Astaamaha Sony Xperia cusub ayaa lagu sifeeyay shabaqa. Miyuu noqon doonaa XZ3 Premium?
Dhowr saacadood ka hor, qaar ka mid ah xogta ayaa laga soo dhejiyay Sony Xperia cusub oo leh saamiga shaashadda ee 18: 9. Sida ku cad shaashadda la daabacay, Sony Xperia cusub oo qarsoodi ah ayaa hadda ku soo dillaacday khadka tooska ah ee nambarka nooca 'H8616' Waxaan kula socodsiinaynaa faahfaahinta!
Samsung Galaxy J6: qeexitaannada iyo qiimaha
Shirkadda Kuuriyaanka ah ee Samsung ayaa hadda si rasmi ah u soo bandhigtay Galaxy J6, oo ah meel dhexdhexaad ah oo na siisa qiimo aad u xiiso badan oo lacag ah.
Vivo waxay soo saareysaa Vivo Y81, oo ah mobiil dhexdhexaad ah oo leh Helio P22 SoC
Vivo ayaa soo saartay qalabkoodii ugu dambeeyay. Kani waa Vivo Y81, oo ah taleefan dhexdhexaad ah oo la socda shaashad aad u weyn, Mediatek SoC, oo la kulmaya Vivo Y81, taleefanka cusub ee cusub ee la bilaabay dhowr saacadood ka hor oo leh processor Mediatek Helio P22 iyo naqshad qurux badan. .
Shaaciyey sawirradii ugu horreeyay ee rasmiga ah iyo qiimaha Xiaomi Redmi 6 Pro
Xiaomi Redmi 6 Pro: Video xaday, sawirro iyo qiimo. Raadi wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee nooca Shiinaha ee la soo bandhigi doono toddobaadka soo socda
Wuxuu shaaca ka qaaday qiimaha Xiaomi Mi Pad 4
Xiaomi Mi Pad 4: Wuxuu shaaca ka qaaday qiimaha labada nooc. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qiimaha kiniinka nooca Shiinaha uu yeelan doono marka uu suuqa ku dhaco.
Wiko Tommy 3: Xadka gelitaanka ee leh 'Android Go'
Wiko Tommy 3: Qeexitaannada, qiimaha iyo bilaabista. Ka ogow wax badan oo ku saabsan heerka gelitaanka cusub ee sumadda leh 'Android Go'.
Dib u eeg Elephone A4, terminal ka yar 100 Euros badda xiisaha badan
LG waxay samaysay LG Stylo 4 rasmi ah, Taleefanka Koofur Kuuriya ee ugu horeeya ee la shaqeeya Android One, nidaamka hawlgalka ee taageerada tooska ah ka haysta Google isla marka uu LG Stylo 4 rasmi yahay. Qalabkani waa kii ugu horreeyay ee Android ah ee shirkadda, waxayna la timid sideed-core Snapdragon 450. Baro taas!
Sumadda Shiinaha, sida muuqata, waxay diiradda saareysaa oo keliya Meizu 16 iyo 16 Pro, labada dhamaadka sare ee xigta ee ku dhici lahaa suuqa dhexdiisa Meizu CEO Jack Wong ayaa ku shaaciyay madasha rasmiga ah ee shirkadda inay ka shaqeynayaan Meizu X8, waxayna la imaan laheyd SD710.
Sawirro cusub oo xaday ee Motorola One Power ayaa muujinaya qaabkeeda si faahfaahsan
Waxaan ku tusineynaa faahfaahin cusub oo ku saabsan naqshadeynta Motorola One Power ee maanta la faafiyay
Shirkadda Huawei ayaa durba ka shaqeyneysa processor-keeda cusub ee Kirin 1020
Kirin 1020: processor-ka Huawei ee dhamaadka sare. Raadi wax badan oo ku saabsan processor-ka cusub ee sumadda Shiinaha ee dhammaadka-dhamaadka cusub.
Nooca caalamiga ah ee Nokia X6 ayaa ka muuqda websaydhka shirkadda
Nokia X6 wuxuu ka soo muuqanayaa bogga rasmiga ah ee shirkadda. Raadi wax badan oo ku saabsan xukunka in taleefanka lagu yaqaan inuu si caalami ah u bilowdo.
Huawei's Mate 10 taxane wuxuu ku darayaa furitaanka wajiga
Taxanaha 'Huawei Mate 10' ayaa hadda helay cusbooneysiin kaas oo aan ku furan karno terminaalka wajigeena
OPPO A73s: Nooca cusub ee bartamaha
OPPO A73s: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista Ogow wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee la filayo inuu yimaado Spain xagaagan.
Xiaomi Mi Pad 4 ayaa la soo bandhigi doonaa tan bisha soo socota ee Juun 25
Marka lagu daro soo bandhigida Redmi 6 Pro oo ka dhici doonta shan maalmood oo keliya Shiinaha, shirkaddu waxay sidoo kale soo bandhigi doontaa kiniinkeeda cusub, Xiaomi waxay soo bandhigi doontaa kiniinkeeda cusub bisha soo socota ee Juun 25. Waxaan ka hadleynaa Mi pad 4, bedelka Mi Pad 3
Google Lens ayaa hadda loo heli karaa OnePlus [apk]
Haddii aad rabto inaad soo dejiso nooca cusub ee kamaradda OnePlus oo la socda Google Lens, qodobkan waxaan ku tusaynaa sida loo sameeyo.
Energizer Hardcase H500S: waa taleefanka cusub ee adag ee shirkadda leh 3000mAh baytari
Energizer, oo ah soo saaraha caanka ah ee baytariyada, tooshashka iyo aalado kale, ayaa soo bandhigay taleefan casri ah oo diirada saaraya, in ka badan enEnergizer ayaa dhawaan soo saaray Energizer Hardcase H500S, oo ah mobili hoose oo xoog leh oo qaabkiisu aad u yaryahay iyo batari 3000mAh ah.
Xiaomi Redmi 6 Pro waxaa la soo bandhigi doonaa Juun 25
Xiaomi Redmi 6 Pro ayaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa Juun 25. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taariikhda soo bandhigida ee bartamaha cusub ee noocyada Shiinaha.
Xiaomi Mi 8 ayaa laga bilaabi lahaa Spain bisha Ogosto
Xiaomi Mi 8 wuxuu imaan doonaa Spain bisha Ogosto. Ka ogow wax badan oo ku saabsan bilaabista dhamaadka-sare ee sumadda Shiinaha ee waddankeenna.
OPPO Raadinta qiimaha X iyo taariikhda la sii daayay ayaa la muujiyay
Waxaan horey u ogaanay qiimaha iyo taariikhda la bilaabayo ee OPPO Find X. Calaamadu waxay ugu dambeyntii muujineysaa qiimaha dhamaadka-sare ee cusub iyo bilaabitaankeeda Yurub.
Sony Xperia XZ3 ayaa ku daatay GFXBench
Sony waxay u muuqataa inay horey u haysatay Sony Xperia XZ3 oo diyaar ah, calankeeda soo socota ee imaan doonta oo ay weheliyaan dhowr astaamo iyo qeexitaan farsamo, iyada oo aan lahayn Sony Xperia XZ3 ayaa hadda ka soo muuqatay GFXBench oo ay la socdaan dhowr ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan iyo farsamooyinka farsamada. Waanu faahfaahinaynaa dhammaantood!
Huawei P9 ma cusbooneysiin doono Android Oreo
Huawei P9 ma heli doono cusbooneysiinta Android Oreo. Raadi wax badan oo ku saabsan isbeddelkan ku yimid qorshooyinka shirkadda ee layaabka leh go'aankan.
OPPO Find X: Calanka cusub ee soo saaraha Shiinaha
OPPO Raadinta X: Caddaymaha, qiimaha iyo bilaabista. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka dhamaadka sare ee sumadda Shiinaha ee horay loogu soo bandhigay si rasmi ah.
Tani waa waxa Xiaomi Mi Max 3 u ekaan doono
Soo saaraha kiisaska ayaa sifeeyey waxa noqon doona Xiaomi Mi Max 3, aalad 6,99 inji ah oo aan qaadan doonin waqti dheer in si rasmi ah loo soo bandhigo.
Samsung waxay soo saari doontaa GPU-yo gaar u ah taleefannadeeda
Samsung waxay soo saari doontaa GPU-yada taleefannadooda. Wax badan ka ogow go’aanka shirkadda ee ah inay soo saarto GPU-keeda gaarka u ah kiniinnada iyo taleefannada gacanta.
Xiaomi ayaa dukaan cusub ka furan doonta Madrid toddobaadkan
Xiaomi ayaa sabtigan ka furi doonta dukaankeeda cusub magaalada Madrid. Faahfaahin intaa ka badan ka ogow furitaanka dukaankan cusub ee lagu iibiyo noocyada Shiinaha ee waddankeenna.
Motorola Waxay Soo Bandhigtay Xalka Telefoonada Flip
Motorola ayaa hagaajin doonta cilladaha shaashadaha isku laaban. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan xalka asalka ah ee shirkadda ee duubista taleefannada.
Google Pixel 3 XL wuxuu sii wadi doonaa inuu isticmaalo hal kamarad laakiin wuxuu qaadan doonaa darajada
Terminaalka xiddigga Google, Pixel 3 XL wuxuu sii wadi doonaa inuu koronto labalaab ah ku qaato dhabarka, waxqabadka wanaagsan ee uu ku kasbaday mid uun darteed.
LG wuxuu ku shaqeyn lahaa LG Q7 leh Android One
LG wuxuu soo bandhigi doonaa nooc ka mid ah LG Q7 oo wata Android One .. Faahfaahin intaas ka badan ka ogow qorshayaasha shirkadda iyadoo qaybtani imaanayso Mareykanka.
Astaamaha iyo qeexitaanada farsamo ee LG X5 cusub (2018). Baro iyaga!
Dhowr saacadood ka hor, LG waxay si taxaddar leh u shaacisay LG X5 (2018), aaladda aaladda cusub ee hadda lagu dhex daray buugga LG ayaa shaacisay dhowr saacadood ka hor LG X5 (2018), aaladda cusub ee astaanta. brand calaamadda hadda lagu dhex daray buug-yaraha Koonfurta Kuuriya.
8845 M5 Titanium ayaa ka muuqda TENAA oo leh nashqad la mid ah tii ka horreysay
8848 waa shirkad shiineys ah oo caan ku ah soo saarida taleefanno qaali ah oo aad u qaali ah asal ahaana leh nashqado aan caadi ahayn. Taleefankii ugu dambeeyay ee ay sii daayaan 8848 M5 Titanium ayaa waxaa cadeeyay TENAA oo ay wehliyaan dhowr astaamo iyo qeexitaanno ka dhigaya inay la mid noqdaan kii ka horreeyay. Waan kuu sheegeynaa!
OUKITEL K7 waa la heli karaa si horay loogu dalbado $ 159,99
Ku hel OUKITEL K7 qiimo dhimis dhan 30 doolar markay bilaabmayso. Ka ogow waxbadan oo ku saabsan soo bandhigida taleefanka Banggood.
La shaandheeyey qiimaha iyo taariikhda la siidaayo ee Xiaomi Mi A2
Xiaomi Mi A2: Qiimaha iyo taariikhda la sii deynayo ayaa xaday. Raadi wax badan oo ku saabsan qiimaha laga filayo taleefanka cusub ee Android One.
Moto C2 wuxuu noqon doonaa taleefankii ugu horreeyay ee Motorola ee wata 'Android Go'
Moto C2: Telefoonkii ugu horreeyay ee Motorola oo wata 'Android Go'. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka cusub ee calaamadda oo ku dhacaya dhamaadka-dhamaadka.
Galaxy Note 9 wuxuu ku imaan doonaa nooc ka mid ah 512 GB oo keyd ah
Galaxy Note 9 wuxuu lahaan lahaa nooc leh 512 GB oo keyd ah. Raadi wax badan oo ku saabsan nooca cusub ee ka imaan doona dhamaadka-dhamaadka.
Xiaomi Redmi 6 iyo 6A ma lahaan doonaan dareemayaal infrared ah
Xiaomi Redmi 6 iyo 6A ma lahaan doonaan dareemayaal infrared ah. Raadi wax badan oo ku saabsan isbeddelka ka dhici doona labada taleefan ee astaanta Shiinaha.
Kani wuxuu ahaa taleefanka gacanta ee isku laaban Samsung oo aan waligiis arag nalka
Waxaan ku tusineynaa sawirada waxa aan noqon karo, ugu dambeyntiina ma aysan aheyn, taleefankii ugu horreeyay ee isku laaban, si loogu magacaabo Samsung si uun.
Samsung's Gear S3 waa aaladda isgaarsiinta ugu fiican ee shaqaalaha hoteelka
Shirkadda Kuuriya ayaa u rogtay aaladda 'Gear S3 smartwatch' qalab aad u wanaagsan oo lagu hagaajinayo codsiyada macaamiisha ee hoteelada
Samsung waxay mar kale u oggolaaneysaa habeynta codka farriimaha
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Samsung ay u sameyso dhammaan isticmaaleyaasha leh terminaalka leh Android Oreo waa awood u lahaanshaha habka farriimaha.
Sharp wuxuu bilaabay nooc ka mid ah Aquos S3 oo leh Android One
Sharp Aquos S3 oo wata Android Ore ayaa laga bilaabay Koonfurta Kuuriya. Waxbadan ka ogow noockan cusub ee taleefanka laga furayo Aasiya.
Naqshadda OPPO Find X ayaa lagu muujiyay ogeysiis cusub
Naqshad sameynta OPPO Find X ayaa durbaba gebi ahaanba la daadiyay. Raadi wax badan oo ku saabsan naqshadeynta ay yeelan doonto dhammaadka-dhamaadka sare ee sumadda Shiinaha.
OnePlus 6 wuxuu helaa casriyeyn si loo saxo cilladda amniga ee la ogaaday
OnePlus 6 waa la cusbooneysiiyay si loo saxo cilladda ammaankeeda. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan cusbooneysiinta OxygenOS ee garaacaya dhamaadka-sare.
Google wuxuu ku darayaa 17 taleefanada Android Enterprise Talinayo
Barnaamijka lagu taliyay ee Android Enterprise wuxuu soo kordhiyaa 17 taleefano cusub. Raadi wax badan oo ku saabsan koritaanka Barnaamijka Ganacsiga Google.
Sony si loo horumariyo bedelka Xperia Home
Sony waxay ka shaqeyneysaa lakab si loo beddelo Xperia Home. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan lakabka cusub ee ku imaan doona taleefannada nooca Japan.
Xiaomi Mi A1 wuxuu bilaabaa inuu cusbooneysiiyo Android 8.1 Oreo
Android 8.1 Oreo wuxuu bilaabaa inuu yimaado Xiaomi Mi A1. Ka ogow wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta bilaabeysa inay soo gaarto isticmaaleyaasha beta hore hadda.
Galaxy Note 9 wuxuu ku dari karaa badhanka jirka cusub si uu u qaado shaashadaha iyo sawirada
Wararkii ugu dambeeyay ee ka imanaya Kuuriya waxay soo jeedinayaan in Galaxy Note 9 uu suuqa ku garaaci karo badhan loo qoondeeyay si loo soo qabto oo loo sawiro
Injineerada OUKITEL ayaa si adag u riixaya: diyaarna u ah inay bilaabaan OUKITEL K7 oo leh 10.000mAh baytari
19-ka Juun waxaad iibsan kartaa OUKITEL K7 iyo batari-keeda 10.000mAh iibka ugu horreeya adduunka. Waxaad ku keydin kartaa $ 30 kumbuyuutarka.
OnePlus 6 wuxuu gaarayaa hal milyan oo unug oo lagu iibiyay 22 maalmood
The OnePlus 6 wuxuu iibiyaa hal milyan oo maalmood 22 maalmood. Dhamaadka dhamaadka astaanta Shiinaha waa guul waxayna horeyba uga badneyd hal milyan oo unug oo la iibiyay.
Xiaomi Black Shark waxaa lagu bilaabay midab buluug ah oo cusub
Xiaomi's Black Shark waxaa laga bilaabay Shiinaha isagoo buluug ah. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan nooca cusub ee la bilaabay ee casriga casriga ah ee nooca Shiinaha.
Shaandheeyey Meizu 16 iyo 16 Pro, dhammaadka-dhamaadka cusub ee sumadda
Meizu 16 iyo 16 Pro: Qeexitaanno, naqshad iyo qiimayaal xaday. Raadi wax badan oo ku saabsan dhamaadka-sare sare ee sumadda Shiinaha ee imaan doonta bisha Ogosto.
Markabka Alcatel 3 iyo 3L ayaa si rasmi ah u yimid Spain
Alcatel 3 iyo 3L: Qiimaha iyo bilaabista rasmiga ah ee Spain. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan labada taleefan ee astaanta ee durba si rasmi ah looga bilaabay Spain.
Samsung Gear S4 ayaa lahaan doonta bateri ka weyn kii hore
Wax walba waxay umuuqdaan inay muujinayaan in Samsung Gear S4 uu suuqa ku dhufan doono ismaamul weyn, wuxuu kordhinayaa kan S4 3n 90 mAh.
Samsung waxay ku dhawaaqi kartaa Gear S4 oo ay weheliso Galaxy Note 9
Smartwatch Gear S4 ee soo socda ayaa la imaan kara Galaxy Note 9 bisha Ogosto 9 inta lagu jiro Unpacked, waxaan kuu sheegi doonaa faahfaahin dheeraad ah
Huawei Mate 10 wuxuu awoodi doonaa inuu ku duubo dhaqdhaqaaq aad u gaabis ah oo cusbooneysiintiisa soo socda
Huawei Mate 10 ayaa lagu cusbooneysiin doonaa dhaqdhaqaaq aad u gaabis ah. Raadi waxa astaamaha cusub ay ku dhufan doonaan dhamaadka-sare ee cusbooneysiinteeda cusub.
Asus Zenfone 5Z wuxuu si rasmi ah u yimid Yurub
Markabka Asus Zenfone 5Z wuxuu yimi Yurub qiimo 499 euro ah. Ka ogow wax badan oo ku saabsan bilaabista taleefanka Asus ka dib soo bandhigiddiisa MWC 2018.
Huawei waxay iibisay lix milyan oo unug oo ah Huawei P20
Huawei P20s ayaa iibiyey lix milyan oo unug saddex bilood gudahood. Raadi wax badan oo ku saabsan iibka cusub ee dhammaadka sare ee Huawei adduunka oo idil.
Cusbooneysiinta cusub ee Nokia X6 ayaa kuu oggolaaneysa inaad qariso qormooyinka
Nokia X6 wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku qariso qormooyinka cusboonaysiinta cusub. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan sida ay taleefanka ugu gaarto mahadsanid taas oo qarinta lagu qarin karo.
Batariga Galaxy Note 9 wuxuu noqonayaa 4.000 mAh
Sida ku cad xogtii ugu dambeysay, Galaxy Note 9 wuxuu suuqa ku garaaci doonaa batari dhan 4.000 mAh, oo ah mid ka mid ah dalabaadka dadka isticmaala ay ka dalbadaan shirkadda Kuuriya.
Xperia XZ3 wuxuu yeelan doonaa laba kamaradood sida ku cad xoqitaankii ugu dambeeyay.
Calaamadda xigta ee shirkadda Japan ee Sony, ayaa suuqa ku dhufan doonta laba kamaradood oo gadaal gadaal ah
Galaxy Note 9 wuxuu ku dhufan doonaa suuqa 5 midab
Sida ku xusan wararkii ugu dambeeyay, Galaxy Note 9 wuxuu ku dhufan karaa suuqa midab cusub oo cusub: bunni, midab loo qoondeeyay koox dalal ah.
The OnePlus 6 Silk White ayaa ku soo laabtay keydka
The OnePlus 6 Silk White waxaa laga heli karaa khadka tooska ah markale. Raadi wax badan oo ku saabsan nooca gaarka ah ee taleefanka ee mar labaad la sii daayo.
Lenovo Z5 ayaa lagu iibiyaa daqiiqado gudahood markii laga bilaabay Shiinaha
Lenovo Z5 ayaa lagu iibiyay maalintiisii ​​ugu horeysay iibinta Shiinaha. Raadi wax badan oo ku saabsan guusha taleefanka sumadda Shiinaha markii la bilaabay.
Vivo Nex: Mobilka cusub ee shirkadda oo leh naqshad shaashad Ultra FullView ah
Dhowr saacadood ka hor, Vivo waxay ku dhawaaqday Vivo Nex saddex nooc oo kala duwan, terminalka cusub ee shirkadda ee imanaya ka dib soo bandhigida VivoVivo ayaa hadda ku dhawaaqay Vivo Nex saddex nooc oo kala duwan, mobilada cusub ee shirkadda ee yimaada ka dib soo bandhigida Vivo Apex ee MWC.
Samsung Galaxy S10 ma lahaan doono afhayeenka hore ee wicitaanada
Samsung Galaxy S10 wuxuu noqon karaa terminal-ka ugu horreeya ee baabi'iya afhayeenka hore ee qalabka adoo ku beddelaya nidaam gariir shaashadda ah.
Huawei waxay rajeyneysaa inay iibiso 200 milyan oo taleefan sanadkan
Huawei waxay rabtaa inay iibiso in ka badan 200 milyan oo taleefanno ah sannadka 2018. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan yoolalka iibka ee sumadda Shiinaha.
Samsung waxay sameyn doontaa shaashadda OLED ee shirkadda soo socota ee Huawei waxayna yeelan doontaa 6,9 inji
Koonfurta Kuuriya war ayaa soo ifbaxay kaas oo sheegaya in Samsung ay soo saari doonto guddi 6,9-inji ah oo soo socda shirkadda Huawei ee soo socota
Asus Zenfone 5Q: Nooca cusub ee bartamaha
Asus Zenfone 5Q: Qeexitaannada, qiimaha iyo bilaabista. Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan noocyada cusub ee dhexdhexaadka ah ee hadda laga heli karo Mareykanka.
Xiaomi Redmi 6 iyo Redmi 6A: Telefoonada cusub ee qoyska Redmi
Xiaomi Redmi 6 iyo Redmi 6A: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista. Raadi wax badan oo ku saabsan moodooyinka cusub ee noocyada dhexe.
Sony waxay joojisaa horumarinta lakabkeeda 'Xperia Home'
Sony waxay ka tageysaa horumarinteeda Xperia Home cape. Raadi wax badan oo ku saabsan go'aanka shirkadda ee ay ku tuurtay lakabkeeda shakhsi ahaaneed.
Xiaomi Mi Max 3 horey ayaa looga shahiiday Shiinaha
Xiaomi Mi Max 3 horey ayaa looga shahiiday Shiinaha. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan shahaadada taleefanka, oo aan ku ogaanno qeexitaankiisa.
Sony Xperia XZ2 hadda waa loo cusbooneysiin karaa Android P Beta 2
Shirkadda Japan ee Sony ayaa horeyba noo oggolaatay inaan ku rakibno Android P Beta 2 dhammaan boosteejooyinka Xperia XZ2.
Samsung Galaxy Note 9 ayaa mar kale ku dhejin doona kaamirooyinka si isdaba joog ah sababtan fudud
Soo-saarista soo socota ee Samsung, Galaxy Note 9, ayaa ina tusi doonta qaab-dhismeedka kamarad jiifa, sida kii ka horreeyay oo kale.
Nooca Nokia X6 International Version wuxuu ka shahaado Taiwan
HMD Global wuxuu Nokia X6 ka bilaabay ku dhowaad bil ka hor Shiinaha, tan iyo markaasna, qalabku wuxuu ahaa guul guud oo iibka ah, isagoo maareynaya in lagu iibiyo Nokia X6 waxaa caddeeyay shirkadda Taiwan ee NCC, waana sababta keentay in la sii daayo. lagaga baaraandegay dhul ka baxsan Shiinaha maalmo gudahood.
Nokia X6 wuxuu mar kale ku iibiyaa Shiinaha
Nokia X6 ayaa mar kale lagu iibiyay iibkiisa flash-ka cusub ee Shiinaha. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan guusha ay bartamaha-calaamaddu ku leedahay bilowgeeda.
Qiimaha la sifeeyay iyo fiidiyaha Vivo Nex
Qiimaha Vivo NEX cusub durba waa la xaday. Raadi wax badan oo ku saabsan qiimaha taleefannada cusub ee sumadda Shiinaha ay yeelan doonaan.
ZTE waxay gaadhay heshiis si ay usii wadato ka shaqaynta suuqa
Shirkadda ZTE waxay heshiis la gashay Mareykanka si ay mar kale u shaqeyso. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan heshiiska ay soo saaraha Shiinaha soo gaareen.
The OnePlus 6 Silk White ayaa mar kale bilaabi doona Juun 12
The OnePlus 6 Silk White wuxuu ku soo laabanayaa suuqa bisha Juun 12. Raadi wax badan oo ku saabsan bilawga taleefanka, ka dib markii uu iibsaday maalmo ka hor.
New Motorola One Power daadi wuxuu muujinayaa qeexitaankiisa
Motorola One Power hadda waxay umuuqataa markale oo muujineysa qeexitaankeeda rasmiga ah, halkan waxaan kuugu sheegeynaa.
Dib u eeg Huawei P20 PRO
Ka dib wax ka badan hal toddobaad oo adeegsi deg deg ah, halkan waxaa ah dib u eegista fiidiyowga ee Huawei P20 PRO halkaas oo aan kuu sheegayo dhammaan wanaagga iyo wax kasta oo xun ee shirkadda Huawei ay na siiso.
Samsung Galaxy J7 (2018) waa kan. Waan kuu soo bandhigeynaa!
Samsung Galaxy J7 (2018) waxaa soo bandhigay shirkadda oo leh xoogaa farsamooyin farsamo xumo ah. Waanu faahfaahinaynaa iyaga!
Samsung Galaxy J3 (2018): Noocyada cusub ee soo gelitaanka shirkadda
Galaxy J3 (2018): Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista. Raadi wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee taleefanka hoose, oo horeyba looga bilaabay Mareykanka.
Astaamaha Oppo Find X ayaa si dhakhso leh ugu soo daadanaya TENAA
Oppo Find X ayaa goor dhaweyd ku daatay TENAA oo xaqiijineysa faahfaahin dhowr ah oo ku saabsan astaamaheeda iyo qeexitaankiisa farsamo.
Shaandheeyey qeexitaanka Vivo Nex iyo Nex S
Vivo Nex iyo Nex S: Qeexitaannada iyo naqshadeynta naqaska. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefannada cusub shirkadda Shiinaha ee soo saarey maalmo kahor intaan la soo bandhigin.
Galaxy A9 Star iyo Galaxy S9 Star Lite: Samsung dhex dhexaadkiisa cusub
Galaxy A9 Star iyo Galaxy S9 Star Lite: Tilmaamaha, qiimaha bilowga. Raadi wax badan oo ku saabsan taleefannada cusub ee dhexdhexaadka ah ee Samsung maanta daaha laga qaaday.
Galaxy S9 ayaa dhaaftay iPhone X taleefanka ugu iibinta badan
Galaxy S9 wuxuu dhaafey iPhone X oo ah iibiyaha ugu fiican Abriil. Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan iibka dhammaadka-sumadda ee bisha Abriil.
[Fiidiyow] OUKITEL K7 oo leh 10.000mAh batari ayaa mari doona tijaabada nolosha batteriga
Waxaan ka hadleynaa OUKITEL K7, mobiil dhaqaale iyo awood leh oo la socda baytari weyn oo 10000mAh ah oo sheegaya in, in kasta oo bateriga weyn ee uu gudaha ku dhex wato, haddana qiimahiisu uu ka macaash badan yahay waxqabadkiisa ama wax qabadkiisana aan wax u dhimayn. kaamirada
OnePlus 6 oo midabkiisu cad yahay iyo Bullets headphones wireless-ka ayaa la iibiyay
The OnePlus 6 iyo Bullets Wireless ayaa laga iibiyay Yurub iyo Ameerika. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan guusha ay dhamaadka-dhamaadka ku leedahay qaabkan gaarka ah ay hayso.
Xiaomi Redmi 6 cusub ayaa la soo bandhigi doonaa June 12
Xiaomi Redmi 6 waxaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa June 12. Ka ogow waxbadan oo ku saabsan soo bandhigida taleefanka cusub nooca Shiinaha.
Muuqaal fiidiyoow ah oo ah waxa loo yaqaan 'Galaxy Note 9' wuxuu noqon doonaa waa la sifeeyey
OnLeaks waxay mar kale hawlgelisay mishiinnada daadinta markanna waxay na tusaysaa bixinta waxa uu noqon doono Galaxy Note 9
Moto Z3 Ciyaar: Motorola's dhex dhexaad cusub
Moto Z3 Ciyaar: Tilmaamaha, qiimaha iyo soosaarida rasmiga ah. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee calaamadda gaadhaya heer dhexdhexaad ah oo ay Motorola cusboonaysiinayso qaybtan.
Asus Zenfone Live iyo Live L1: Telefoonada cusub ee leh Android Go
Asus Zenfone Live iyo Live L1: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan moodooyinka cusub ee dhammaadka hoose ee sumadda Shiinaha.
Xiaomi Mi 8 waxaa lagu iibiyaa wax ka yar hal daqiiqo Shiinaha
Xiaomi Mi 8 waxaa lagu iibiyaa 37 ilbidhiqsi maalintiisii ​​ugu horreysay Shiinaha. Raadi wax badan oo ku saabsan guusha dhamaadka-sare ee sumadda Shiinaha markay ka bilaabmayso waddankaaga.
LG Q Stylus, Stylus Alpha iyo Stylus Plus: Khamaarka khadka dhexe ee qalinka
LG Q Stylus, Stylus Alpha iyo Stylus Plus: Tilmaamaha iyo Daahfurka. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taleefannada cusub ee noocyada dhexdhexaadka ah ee horay loo soo bandhigay.
Xiaomi waxay bilaabi doontaa MIUI 10 bisha Juun 7
Lakabka cusub ee shaqsiyeynta laga bilaabo Xiaomi ilaa Miui 10, wuxuu bilaabi doonaa inuu adduunka oo dhan ka bilowdo Juun 7.
Lenovo A5 iyo Lenovo K5 Xusuusin: Nooca cusub ee bartamaha
Lenovo A5 iyo Lenovo K5 Xusuusin: Qeexitaannada, Qiimaha iyo Daahfurka. Ka ogow wax badan oo ku saabsan bartamaha-dhexe ee cusub soo saaraha Shiinaha ee shalay si rasmi ah loo shaaciyey.
10-ka taleefan ee ugu awooda badan bisha May 2018, sida uu sheegayo AnTuTu Benchmark
AnTuTu waxay noo keenaysaa liistada boosteejooyinka ugu awooda badan suuqa bilba bil, taas oo, munaasabaddan awgeed, waxaan ogaan karnaa ku darista OnePlus 6, casriga cusub ee casriga ah ee maalmo ka hor ay soo saartay shirkadda Shiinaha. Waan kuu balaarinay!
Lenovo Z5 waa rasmi. Ogow astaamaha iyo tilmaamaha uu leeyahay!
Lenovo wuxuu hadda bilaabay Lenovo Z5, mobile-keeda cusub ee dhexe oo leh tilmaamo farsamo oo aad loogu hagaajiyay miisaaniyadiisa, iyo shaashad aad u weyn oo ay cajiib tahay in lagu hayo dhinacyo aad u cidhiidhi ah oo dhinac kasta ah.
Xiaomi Mi Band 3 waxaa lagu keydiyay 640.000 jeer Shiinaha
Xiaomi Mi Band 3 wuxuu helaa 640.000 boos celin gudaha Shiinaha. Ka ogow wax badan oo ku saabsan guusha jijimadda waddankaaga oo aad ka heshay boos celin ka hor iibkeedii ugu horreeyay.
OPPO Find X waxaa lagu soo bandhigi doonaa 19ka Juun magaalada Paris
Xaqiijiyay: The OPPO Find X waxaa lagu soo bandhigi doonaa 19ka Juun magaalada Paris. Ogow wax badan oo ku saabsan imaatinka taleefanka cusub ee Shiinaha, kaas oo sidoo kale calaamadeeya soo gelitaankiisa suuqa Yurub.
Nokia ayaa bilaabi doonta taleefan leh Snapdragon 710 deyrta
Nokia waxay soo saari doontaa taleefan casri ah oo ay la socoto Snapdragon 710 deyrtan. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka cusub ee calaamadda ee gaari doona bartamaha dhexe oo ay rajeynayaan inay ku guuleystaan ​​qaybtaan.
Samsung Galaxy S9 + oo leh 256GB oo xasuusta gudaha ah ayaa hadda laga heli karaa Spain!
Samsung Galaxy S9 Plus ayaa horeyba loogu heli karaa iibinta gudaha Spain qaabkeeda oo leh 256GB oo ah meel gudaha lagu keydiyo oo qiimaheedu ka yar yahay kun euro. Waan ku wargelinaynaa!
Asus ROG Telefoon: Telefoonka casriga ah ee casriga ah
Asus ROG Telefoon: Noocyada, qiimaha iyo bilaabista. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka cusub ee ciyaartu ku cusub tahay ee suuqa laga bilaabi doono dhawr bilood gudahood.
Ku hel Homtom S99 kaliya $ 129,99
Homtom S99: Taleefanka cusub ee Homtom wuxuu ku kacayaa $ 129,99 oo keliya. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka cusub ka hel shirkadda soo saaraha ee maanta la iibinayo.
Samsung Galaxy S10 ayaa yeelan doonta sedex kamaradood oo sawiro ah
Sida laga soo xigtay falanqeeyayaal kala duwan, Samsung Galaxy 10 ee soo socota ayaa suuqa la geli doonta 3 kamarad oo gadaal ah, sida Huawei P20 Pro
Sawirro cusub iyo qeexitaanno gaar ah oo xaday Motorola One Power
Motorola One Power: Sawirro qarsoon iyo qeexitaanno. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka ugu horreeya ee astaanta si aad ugu isticmaasho Android One nidaamkeeda hawlgalka.
Soo bandhigtay qeexitaannada ugu horreeya ee OPPO Find X
OPPO Find X: Cadeyn gaar ah oo la soosaaray iyo Naqshadaynta ayaa xaday. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka cusub ee sumadda Shiinaha oo noqon doona nooca ay sumaddu si rasmi ah ugu gasho Spain
Shaandheeyey qeexitaannada ugu horreeya ee Xiaomi Mi A2 Lite
Xiaomi Mi A2 Lite: Waxay xadeen naqshadeynta iyo qeexitaankeeda. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka cusub ka raadi sumadda Shiinaha ee dhowaan suuqa soo geli doonta.
Vivo NEX waxaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa June 12
Vivo waxay si rasmi ah u soo bandhigi doontaa Vivo NEX bisha Juun 12. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka sare ee sare ka raadi sumadda Shiinaha ee dhowaan suuqa soo geli doonta.
Liiska rasmiga ah ee taleefannada Xiaomi ee ku habboon MIUI 10
Baro liiska ay shaaciyeen shirkadda ay ku jiraan taleefannada gacanta ee horeyba ula jaan qaadi jiray MIUI 10, iyo kuwa la jaan qaadi doona dhammaadka Juun iyo Luulyo.
Oppo Find X waxaa si rasmi ah u xaqiijiyay Oppo
Oppo waxay aakhirkii si rasmi ah u shaacisay soo bandhigida calankeeda soo socota, Oppo Find X ayaa iman doonta dhowaan
Warqado xaday oo xaqiijinaya soo-saarista Samsung Galaxy A9 Star & A9 Star Lite
Galaxy A9 Star & A9 Star Lite: La xaqiijiyay in laga bilaabay Shiinaha. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefannada cusub ee sumadda Kuuriya oo soo-saaristooda lagu xaqiijiyay Shiinaha iyada oo loo marayo boodhadh.
Daahfurka Galaxy Note 9 ayaa dib loo dhigi doonaa dhowr toddobaad
Isbeddelka naqshaddu wuxuu daahiyaa bilaabista Galaxy Note 9. Faahfaahin intaa ka badan ka ogow isbeddelkan naqshadeynta ee ku socda noocyada ugu sarreeya ee astaanta, taas oo keeneysa in daahitaankeedu dib u dhaco laba toddobaad.
Huawei Watch 2 (2018): Saacadda cusub ee Wear OS
Huawei Watch 2 (2018): Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan saacadda sumadda Shiinaha oo aan innaga tagayn wax cusub marka loo eego jiilkii hore.
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition: qeexitaannada iyo qaababka dhammaadka-sare ee shirkadda
Waxaan kuu soo bandhigeynaa Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, oo ah nooc ka xoog badan Mi 8 oo leh astaamo aad u cusub oo aan waligood horay loogu arag taleefannada kale.
Xiaomi Mi Band 3: jiilka cusub ee jijimooyinka ayaa hadda rasmi ah
Xiaomi Mi Band 3: Caddaymaha, qiimaha iyo bilaabista. Raadi wax badan oo ku saabsan jijin ficil cusub ee Xiaomi oo horeyba loogu soo bandhigay maanta dhacdada astaanta Shiinaha.
Xiaomi Mi 8 SE: Dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo lagu dhiirrigeliyey dhammaadka-dhamaadka
Xiaomi Mi 8 SE: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista rasmiga ah. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan bartamaha-dhexe ee noocyada Shiinaha ee dhiirrigeliya Xiaomi Mi 8 oo horeyba loogu soo bandhigay dhacdada maanta.
MIUI 10: Xiaomi lakabkeeda qaabeynta cusub ayaa halkan taal
MIUI 10: Xiaomi lakabkeeda qaabeynta cusub. Soo ogow waxyaabaha cusub ee noocan cusubi naga tegayo ee ku sharxaya naqshad cusbooneysiin la mid ah Android P.
Xiaomi Mi 8: Calaamadda cusub ee sumadda ayaa hadda rasmi ah
Xiaomi Mi 8: Tilmaamaha, qiimaha iyo soosaarida rasmiga ah. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka sare ee sare ka raadi nooca Shiinaha ee horay loo soo bandhigay maanta.
Xiaomi waxay labanlaabantay iibkeeda adduunka oo dhan rubuc hore
Xiaomi waxay labanlaabaysaa iibgeeda rubuca hore ee sannadka 2018. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan isbeddelka iibka sumcadda Shiinaha ee rubuca hore ee sannadkan, kuwaas oo horeba u labalaabay iibkooda oo ah shirkadda afraad ee soosaarka ugu iibsiga badan.
Daawashada iyo aragtida koowaad ee Huawei P20 PRO
Furitaanka iyo muuqaalka ugu horreeya ee fiidiyowga ee Huawei P20 PRO, Huawei ee ugu sarreeya noocyada kala duwan ee macno ahaan u garaacaya dhinac kasta.
LG V35 ThinQ hadda waa rasmi: Ogow qeexitaankiisa
LG V35 ThinQ: Qeexitaannada, Qiimaha iyo Daahfurka. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan astaanta-dhamaadka sare ee sumadda ee horayba loogu soo bandhigay si rasmi ah
HTC Desire 12 + waa la xaqiijiyay Spain. Ogow qiimaheeda iyo helitaankiisa!
HTC Desire 12+ waxaa laga helaa laga bilaabo maanta Spain qiimo ahaan iyadoo loo eegayo faa'iidooyinka ay na siiso. Waan kuu soo bandhigeynaa!
Motorola One Power: Waxaa lagu shaandheeyey taleefanka cusub ee shirkadda ee loo yaqaan 'Android One'
Motorola One Power: Taleefanka cusub ee wata Android One. Waxbadan ka ogow aaladda cusub ee sumadda ee adeegsan doonta noocyadan nidaamka qalliinka ah.
OnePlus ma furi doono taleefannada dhexdhexaadka ah illaa ugu yaraan 2021
OnePlus wuxuu sii wadi doonaa inuu ku sharaddeeyo dhamaadka-sare sannadaha soo socda. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qorshayaasha shirkadda, oo aan taleefoonno ka soo furi doonin bartamaha xilligaan.
Shaandheeyey qeexitaannada ugu horreeya ee Xiaomi Mi 8 SE
Xiaomi MI 8 SE: Qeexitaannada ugu horreeya ee xaday. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan bartan-dhexaadkan oo ballan-qaadaya inuu yahay mid kooban oo dhammaadka-dhamaadka ah oo laga yaabo inaan si rasmi ah u ogaanno berri.
Xiaomi Mi 8 ayaa si rasmi ah u imaan doona Spain
Xiaomi Mi 8 ayaa si rasmi ah looga bilaabi doonaa Spain. Ka ogow wax badan oo ku saabsan imaatinka taleefanka sare ee heerka Shiinaha ee Spain iyo toddobo dal oo kale.
Nokia 5.1, Nokia 3.1 iyo Nokia 2.1: Qadka dhexe ee cusub oo leh shaashad 18: 9 ah
Nokia 5.1, Nokia 3.1 iyo Nokia 2.1: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilowga. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefannada cusub ee nooca dhexdhexaadka ah ee lagu soo bandhigay munaasabad ka dhacday Moscow.